नेपाल आज | ‘सरकारले स्वास्थ्य उपचारमा बजेट विनियोजन गर्नु बालुवामा पानी खन्याएजस्तै’ (भिडियाेसहित)
समाचार कभर स्टोरी स्वास्थ्य समाज भिडियो
‘सरकारले स्वास्थ्य उपचारमा बजेट विनियोजन गर्नु बालुवामा पानी खन्याएजस्तै’ (भिडियाेसहित)
सोमबार, १५ असोज २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । सामान्यतः स्वस्थ भन्नासाथ कुनै पनि रोग नलागेको अवस्था या केही नभएको भन्ने बुझिन्छ । तर वास्तवमा यो मानिसहरूको साँघुरो बुझाइ भएको बताउँछन् जनस्वास्थ्ययविज्ञ तुल्सीराम भण्डारी । नेपाल आजसँगको कुराकानीमा उनले नेपाली जनताको स्वास्थ्य स्थिति, त्यसका कमजोरी र स्वास्थ्यय प्रवद्र्धनबारे कुराकानी गरेका छन् । उनीसँगको कुराकानीका सम्पादित अंश :
स्वास्थ्यको फराकिलो रूप बुझ्नका लागि जनस्वास्थ्यबारे बुझ्नुपर्छ । विशेषगरी जनस्वास्थ्यले चारवटा कुरालाई मुख्यरूपमा समावेश गर्छ । ती हुन्, मानिसको स्वास्थ्यको प्र्रवद्र्धन, स्वास्थ्य समस्याको रोकथाम, स्वास्थ्यको सुरक्षा र स्वास्थ्य समस्याको उपचार । यी चारवटा कुुरालाई सँगै लैजान सकियो भने मानिसको स्वास्थ्य सुध्रिएको मान्न सकिन्छ ।
तर, हाम्रो समस्या नै बुझाइमा छ । मान्छे शिक्षित छन् तर स्वास्थ्यको दृृष्टिकोणले साक्षरता कम छ । रोग निको हुनुु नै स्वास्थ्य हुनुु होइन । हाम्रोजस्तो अविकसित मुलुकमा स्वस्थ रहन चाहिने कुराहरू अपुग छन् । कसरी स्वस्थ हुने भन्नेबारे उपयुक्त ज्ञान नै छैन । रोग लागिसकेपछिका मात्र कुरा गर्ने बानी छ । उपचार त अन्तिम उपाय हो । रोगबाट बच्ने त थुप्रै तरिका छन् । दुर्घटना हुन्छ भनेर अस्पताल खोल्ने होइन दुर्घटना कसरी रोक्ने भन्नेबारे ध्यान दिने हो ।
हाम्रो ध्यान नै उपचार कहाँ राम्रो पाइन्छ भन्नेबारे बढी केन्द्रित भयो । स्वस्थ रहन कहाँ जाने ? भन्नेबारे सोचेमात्र जनस्वास्थ्य सुध्रिन्छ । रोगी हुने दर घट्छ र स्वास्थ्य स्थितिमाथि जान्छ । विकसित मुलुकमा जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिइएको छ । तर, हामी रोग लागेपछिमात्र उपचार गर्ने र देशको बजेट विनियोजन गर्दा ठूलो हिस्सा स्वास्थ्यमा लगानी भएको हुन्छ । यसमा मात्र ध्यान जान थाल्यो । मूल जरो पत्ता लगाएर काम गरेमात्र स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिन्छ ।
सरकारले जनतामाझ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउनकै लागि विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाको परिचालन गरेको छ । केन्द्रीय स्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छ, प्रान्तीय स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला जनस्वास्थ्य स्वास्थ्य र गाउँपालिकामा स्वास्थ्य एकाइमार्फत स्वास्थ्य सेवा दिने काम भएको छ । तर पनि जनताले पाउने सेवाको गतिमा भने कमजोरी छ । यसमा जनताले उपचारको सेवामात्र होइन रोकथाम र स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका सेवा पाएका छन् या छैनन् भन्नेबारे बुझेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मूल समस्या नै स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयनमा छ । २०४८ मा पहिलो स्वास्थ्य नीति आयो । प्रत्येक गाउँपालिकामा स्वास्थ्य एकाइ खोल्ने र स्वास्थ्य सेवा दिने । गाउँमा गएर प्रवद्र्र्धनात्मक, सुरक्षात्मक रोकथामको सुक्षा दिनुु भन्दा पनि त्यहीँ बस्ने र आएका मानिसलाई स्वास्थ्य उपचार गराउने गतिविधि बढ्यो । यहीँबाट समस्या सुरु भयो । यसको परिकल्पना ७५ प्रतिशत रोकथाम र प्रवद्र्धनात्मक काममा ध्यान दिने र २५ प्रतिशत उपचारमा केन्द्रित रहने थियो । तर शत प्रतिशत नै मानिसहरू उपचारमा केन्द्रित भए । खोप लगाउने, परिवार नियोजनका सामान वितरण गर्ने, पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमबाहेक अरूमा ध्यान जान सकेन । गाउँमा गएर झाडा पखाला, रुघाखोकीबाट कसरी बने, वातावरण कसरी सफा राख्ने, यसरी क्षेत्रमा गएर काम गर्ने वातावरण नुहँदा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र रोकथाममा सुधार आएन ।
यसले गर्दा जति पनि स्वास्थ्य उपचारको लागि बजेट विनियोजन भयो, यो बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भयो । जीवनशैलीले ल्याउने रोग बढ्न थाले । मानिसलाई कसरी बाँच्ने भन्नेबारे सिकाइएन, कसरी उपचार गर्नेबारेमा सिकाइयो ।
के हुन् जीवनशैलीले निम्त्याउने रोग ?
मुटुुको रोग, श्वासप्रस्वाससम्बन्धी रोग, रक्तचाप, हृदयाघात, क्षयरोग, क्यान्सर र सडक दुुर्घटना पनि जीवनशैलीले ल्याउने समस्या हो । यी समस्याहरूको उपचारमा मात्र केन्द्रित हुने होइन । यसको सावधानीमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । यसको जरो कहाँ हो भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । रोग लागेपछि त्यसको नतिजामा मात्र केन्द्रित हुने होइन ।
विशेषगरी पहिला पहिला नेपालमा जीवनशैलीले ल्याउने रोग भनेको धनी देशको रोग हो भन्ने मानसिकता थियो । तर अहिले हाम्रो समाजमा यी रोगहरू व्यापक रूपमा बढ्न थालेका छन् । यस्ता रोगहरू मानिसको खानपानमा भर पर्छन् । चिल्लो, नुनको मात्रा, हरियो सागसब्जी, फलफूल, पानी कति खाने भन्नेबारे सचेत हुनुपर्छ । मानिस निष्क्रिय बस्नु हुँदैन । घरमा बसेर आराम गर्ने होइन । सक्रिय जीवन बिताउनुपर्छ । एक्सरसाइज गर्नुपर्छ । नेपालको तथ्यांक हेर्दा धेरै मानिसको धूमपान र मध्यपानबाट मृत्यु हुन्छ । यसले गर्दा जीवनशैलीले ल्याउने रोग घट्नुको साटो बढेको छ ।
यही ट्रेन्ड रहने हो भने, अबको १० वर्षमा नेपालमा मर्नेको ठूलो संख्या जीवनशैलीले निम्त्याउने रोगको कारण हुन्छ ।
कतिपय कुरामा मानिसहरू सचेत हुँदाहुँदै पनि अस्वस्थ जीवनशैली अपनाउन बाध्य भएको देखिन्छ । जस्तो बजारमा पाइने तरकारी, प्रदूषित वातावरण आदि इत्यादि । यस्तो कुराहरूमा व्यक्ति आफैँ बढी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । तर, यसमा सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । बजार अनुगमन, किसानलाई शिक्षित बनाउने, बजारमा आउने चिजहरूलाई परीक्षण गर्ने, जनचेतना बढाउने काममा तीव्रता दिनुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी कम निर्वाह गर्दा जनताले दुःख पाइरहन्छन् ।
पर्याप्त रूपमा खुल्ला ठाउँ छैनन् । यो पनि समस्या हो । सामाजिक रूपमा के के कुुरा आवश्यक हुन्छ, कति खुल्ला ठाउँ छोड्ने, कति हरियाली बनाउने भन्नेबारे सरकारले ध्यान दिनुुपर्छ । सामाजिक विकासका सूचकबारे अध्ययन गरेर बल्ल स्मार्ट सिटीको परिकल्पनालाई अघि बढाउनुपर्छ ।
तयारी खाना खाएर फाइदा छैन
तयारी खानालाई सकेसम्म निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसमा केही पोषण तत्व पाइन्न । अखाद्य वस्तु, रङकोे प्रयोग र पोषण तत्व कम हुने गर्दा यसले फाइदा गर्दैन । घरमै बनेका खानेकुरा खानमा जोड दिनुपर्छ । एउटा पेय पदार्थ किनेर खानुको साटो एक लिटर पानी किनेर खानु धेरै फाइदा छ । यो कुरा बुझाउनुपर्छ ।
नेपालमा मानसिक रोगको समस्या पनि भयावह रूपमा गएको छ । मानसिक रोगको कारण सयजनामा सातजना मानिसले आत्महत्याको कारण ज्यान गुमाउँछन् । यसका कारणहरू धेरैै छन् । तर मुख्य कारण सामाजिक कारण देखिन्छ ।
विसं २०४८ सालमा नेपाल सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य नीतिले केही समस्या ल्यायो । निजी मेडिकल कलेज र निजी संस्था व्यापक रूपमा खुल्न थाल्यो । यसले पहिलो प्राथामिकता उपचारलाई बनायो । आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएकाहरूले सजिलै डाक्टर पढ्न पाए । पैसा तिरेर डाक्टर हुनेहरू ४०, ५० लाख खर्च गरेर पढेपछि गाउँमा गएर सेवा गर्ने भन्दा पनि आर्थिक हिसाबमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे केन्द्रित भए । सहरमा काम गर्ने कि विदेश जाने अवस्थाले समस्या ल्यायो ।
डब्लुएचओका अनुसार कम्तीमा हजारजना व्यक्तिबराबर एउटा डाक्टर चाहिन्छ । तर नेपालमा सत्र सय जनसंख्याको लागि एउटा डाक्टर छ, तर स्थिति कस्तो छ भने, डाक्टरजति सबै सहरमा बस्ने र सहर बजारमा आठ सय जनसंख्यालाई एउटा डाक्टर भए पुग्छ । तर, गाउँमा सात हजार जनसंख्याको लागि एउटा डाक्टर पनि छैन ।
निजी संस्था नखुल्ने भन्ने होइन । तर राज्यले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कार्य अघि बढ्नुप-यो । गाउँमा रहने डाक्टरहरूलाई सुविधा दिनुप-यो । तबमात्र नेपालको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउँछ ।
जनस्वास्थ्ययविज्ञ तुल्सीराम भण्डारी तुल्सीराम भण्डारी जनस्वास्थ्ययविज्ञ